By Uhlaziyo lweMedia; Ukuhlaziywa ngu-Varixcare.cz. Igqityelwe ukuvuselelwa ngoJan 18, 2021.
I-Thrombocytopenia yinqanaba eliphantsi ngokungaqhelekanga leeplatelets egazini.
I-tylenol pm ngelixa ukhulelwe
Iiplatelets zenziwa ngumongo wethambo. Banceda igazi lakho ukuba ligutyungeke. Abantu abane-thrombocytopenia banokuba nokopha kakhulu.
Le meko inokwenzeka ngamanqanaba ahlukeneyo. Umngcipheko wokopha uyenyuka njengoko inani leplatelet lincipha.
I-Thrombocytopenia inokwenzeka yodwa. Okanye, inokuvela njengengxaki yesinye isifo, njengomhlaza okanye usulelo lwentsholongwane. Ngamanye amaxesha, yimeko engapheliyo (ehlala ixesha elide) eqhubeka iminyaka. Kwezinye iimeko, ikhula ngesiquphe nangokumangalisayo.
Ngokubanzi, thrombocytopenia ikhula ngesizathu esinye okanye nangaphezulu kwezi zilandelayo:
Umongo wethambo lomzimba uyasilela ukuvelisa iiplatelets ezaneleyo. Oku kunokwenzeka ngenxa yokuba:
Umhlaza ungena kumongo wethambo kwaye utshabalalise ii-megakaryocyte. Ezi ziiseli ezenza iiplatelets.
I-aplastic anemia ichaphazela ukuveliswa kweplatelet.
Imichiza enetyhefu, unyango ngemitha okanye ichemotherapy itshabalalisa ii-megakaryocyte.
Iingxaki zemfuza zithintela ukuveliswa kweeplatelets eziqhelekileyo.
Ukuchazwa kweziyobisi ezithile okanye utywala kubambezela imveliso yee-megakaryocyte. I-Thrombocytopenia ixhaphakile kwiziselo ezinxilisayo.
Emva kokubandezeleka kwintsholongwane, ezinye izigulana ziya kuncipha kwimveliso yeplatelet. Le ngxaki ihlala ixeshana kwaye iyaphucuka ngaphandle konyango.
Umongo wethambo uvelisa iiplatelets ezaneleyo, kodwa umzimba uyazitshabalalisa. Amajoni omzimba anokuvelisa izilwa-buhlungu ezihlasela iiplatelets. Ezinye zezinto ezibangela le ngxaki zibandakanya:
I-immune thrombocytopenic purpura (ITP). Le meko inokudlula ngokukhawuleza okanye inokuhlala ixesha elide. I-ITP inokwenzeka ngokwayo okanye inokunxulunyaniswa nokunye ukuphazamiseka komzimba, njenge-systemic lupus erythematosus (SLE)
Usulelo lwe-HIV. Abantu abosuleleke yintsholongwane ngamanye amaxesha baba neeplatelet count eziphantsi.
Ingxaki yokukhulelwa. Ipesenti encinci yabasetyhini abakhulelweyo bahlakulela uhlobo oluthambileyo lwale meko xa bekufutshane nokuhanjiswa.
Impendulo kunyango. Thrombocytopenia kunokubangelwa naliphi na iyeza. Umzekelo, heparin , Umzekelo wequinine kunye ne-valproic ( Idepakote ) kunokubangela amajoni omzimba ukuba enze ii-anti-platelet antibodies. Kwiimeko ezininzi, imeko ikhula ngaphakathi kweentsuku zokuqala ichiza elitsha.
Ukonzakala ngokwasemzimbeni. Iiplatelets zinokwenzakala okanye zitshatyalaliswe njengoko zidlula:
Ivalvu yentliziyo eyenziweyo
Oomatshini kunye netyhubhu esetyenziselwa utofelo-gazi olukhulu okanye utyando lwe-cardiopulmonary bypass
Usulelo. Le meko inokukhula emva kosulelo olunje nge-mononucleosis okanye i-cytomegalovirus.
I-Thrombotic thrombocytopenic purpura (TTP). Esi sifo sinqabile. Ifom yegazi kwi-artery zincinci emzimbeni. Iiplatelets zityiwa yile nkqubo. Abantu abane-TTP banayo i-anemia (ubalo lweeseli ezibomvu ezisezantsi), umkhuhlane, ukungasebenzi kakuhle kwezintso kunye neempawu zemithambo-luvo.
Zininzi kakhulu iiplateleti ezisesiseleni . Ngokuqhelekileyo, malunga nesinye kwisithathu seeplatelet zakho zisesipeni sakho. Zonke ezinye zijikeleza egazini lakho. Nangona kunjalo, ukuba udakada luyakhula ngenxa yesifo esibi sesibindi, singaqala ukubamba iiplatelets ezininzi. Oku kushiya iiplatelets ezimbalwa ukuba zijikeleze kwigazi lakho.
Abantu abane-thrombocytopenia enzima banokuba nokopha ngokungaqhelekanga phantse naphi na emzimbeni.
Amabala abomvu okanye ansundu kulusu (olubizwa ngokuba yi-petechiae), ahlala egxile kwimilenze esezantsi
Ukugruzuka okugqithisileyo, kwanakwimeko yomothuko encinci
Igazi kumchamo okanye isitulo
Ukopha ngokungaqhelekanga okanye ngokugqithileyo emlonyeni okanye empumlweni
Ukopha ngokungaqhelekanga kwilungu lobufazi, ngakumbi ukuhamba ngokungaqhelekanga okuya exesheni
Ukopha ngaphakathi kwithumbu lesisu, kubandakanya ukopha kwi-rectum
Ukopha kakhulu emva kotyando okanye umsebenzi wamazinyo
Intloko kunye nezinye iimpawu ze-neurological ezibangelwa ukuphuma ngaphakathi kwengqondo. Oku kunqabile kakhulu kwaye kwenzeka kuphela xa ubalo lweplatelet luyehla kakhulu.
Ugqirha wakho uya kuqala ngokukubuza malunga nembali yakho yonyango. Uya kubuza malunga:
Iinkqubo zonyango zamva nje okanye izibhedlele (abantu bahlala befumana i-heparin esibhedlele ukunqanda amahlwili egazi)
Nokuba ukhe watofelwa igazi
Amachiza amanje (kubandakanywa i-counter-counter and remed remedies)
Usela kangakanani utywala
Usulelo lwamva nje okanye ugonyo
Ukuba unamalungu okanye iintlungu ezibuhlungu
Ukuba nabani na kusapho lwakho wakhe wanamaqondo eeplatelets asezantsi
Ukuba ukhulelwe, ugqirha wakho uya kufuna ukwazi umhla wakho.
Ugqirha wakho uya kukuvavanya iimpawu ezithile zokopha okungaqhelekanga. Oku kubandakanya imivumbo okanye amabala egazi kulusu lwakho. Naye uya kuziva esiswini sakho ukumisela ukuba udakada lwakho lwandile na. Ugqirha uya kujonga nayiphi na imiqondiso yesifo sesibindi.
Ukuqinisekisa ukuxilongwa, ugqirha uya kuyalela uvavanyo lwegazi. Uvavanyo lwegazi luya kulinganisa inani leeplatelets egazini lakho. Iimvavanyo zegazi ezongezelelweyo ziya kuyalelwa ngaxeshanye ukunceda ukufumanisa ukuba kutheni une-thrombocytopenia.
Ukuba ugqirha wakho ucinga ukuba unokusabela kwichiza, unokukucela ukuba uyeke ukuthatha amayeza. Ugqirha uya kubona ke ukuba inani leplatelet yakho liyenyuka na. Ukuba oko kuyenzeka, une-thrombocytopenia ebangelwa ziziyobisi.
Ugqirha wakho unokuncoma i-biopsy yomongo wethambo. Kule nkqubo, kusetyenziswa inaliti ende ukususa iqhekeza lomongo wethambo. Umongo uvavanywa elebhu. Inkangeleko yomongo wethambo kunye neeseli ezivelisa iplatelet zinceda ukumisela ukuba yintoni ebangela ingxaki yakho.
Ihlala ixesha elingakanani i-thrombocytopenia ixhomekeke kwisizathu sayo.
Umzekelo, ezinye izigulana ezinamava e-ITP ezingapheliyo iminyaka yokugruzuka ngokulula kunye nokuphuma kwegazi kusisi ngokungaqhelekanga. Basenokuba neziqendu eziphindaphindiweyo zokopha kakhulu.
Uninzi lwabantwana abane-ITP ebukhali bayachacha kwiiveki ezine ukuya kwezintandathu.
Abanye abantu banesifo esiphantsi kangangokuba baphantse bangabinayo ingxaki yokuphuma kwegazi.
Abantu abaninzi abane-thrombocytopenia ebangelwa ziziyobisi bayachacha kwiintsuku ezisi-7 ukuya kwezi-10 emva kokuba beyekile ukuthatha amayeza.
Iimeko ezininzi ze-thrombocytopenia azinakuthintelwa.
Unokukuphepha ukusela izixa ezikhulu zotywala ukunciphisa umngcipheko wokuphuhlisa i-thrombocytopenia enxulumene notywala.
Ukuba sele ubenesiqendu esinye se-thrombocytopenia ebangelwa ziziyobisi, ingxaki inokubuyela ukuba uthatha iyeza elifanayo kwakhona. Ukukunceda ukukhusela oku, shicilela igama lamayeza athile abangele ingxaki. Xelela lonke uchwepheshe wezonyango ukuba undwendwele malunga nokuziva kwakho kwesi siyobisi.
Ukuba ugqirha wakho uzimisele ukuba usengozini yokuphuhliswa yile meko, unokukuxelela ukuba ungayithathi Iasprini . Kungenxa yokuba iasprini yonakalisa ukusebenza kweplatelet.
Ukuphathwa kwe-thrombocytopenia kuxhomekeke kwisizathu sayo kunye nobukhali.
idosi ephezulu ye-aleve
Ukuba i-thrombocytopenia yakho ithambile kwaye ayibangeli kuphuma gazi, awunakufuna unyango. Esi sisoloko sisicwangciso esisemgangathweni kubantwana abane-ITP ebukhali. Uninzi lwabantwana luyachacha ngaphandle konyango kwisithuba seeveki ezintandathu.
Ukuba i-thrombocytopenia yakho inyanzeliswa ziziyobisi, ugqirha wakho unokutshintsha amayeza akho. Uninzi lwabantu luyachacha ngaphandle konyango olongezelelweyo emva kokuyeka ukuthatha amayeza.
Izigulana ezinobalo olusezantsi kakhulu lweplatelet kunye / okanye ukopha okubalulekileyo kuya kufuna unyango olungaphaya. Izinketho zonyango zibandakanya:
Ukufakwa kwegazi kwiPlatelet. Ukutshintshwa kweeplatelets zihlala zigcinwa kwizigulana ezinenani eliphantsi kakhulu leplatelet okanye ukopha okusebenzayo.
Kwizigulana ezinokwehla kwemveliso yeeplatelets, oogqirha banokumisela inaliti yeRomiplostim ukukhuthaza umongo wethambo ukuba wenze iiplatelets ezingakumbi.
Izigulana ezine-ITP zihlala ziphathwa nge-glucocorticoids ethathwe ngaphakathi okanye ngomlomo. I-Immunoglobulin nayo inokunikezelwa ngaphakathi. Kwi-ITP eqhubekayo, ugqirha wakho unokucebisa ii-injection ze-monoclonal antibody rituximab ( Rituxan ).
I-Splenectomy (ukususwa ngotyando). Oku kunokuba yimfuneko ukuba i-ITP engakhange iphuculwe nolunye unyango. Ukuba udakada ususwe, i-thrombocytopenia iyahamba ngaphezulu kwesiqingatha sezigulana ze-ITP. Ukuba ukususa udakada akuncedi, iziyobisi zinokukhutshwa.
Tsalela umnxeba ugqirha wakho ukuba ukhulisa naziphi na iimpawu ze-thrombocytopenia. Qiniseka ukuba uyatsalela umnxeba ukuba ubona imivumbo engaqhelekanga okanye ukuba ukopha ngokuphuma kwempumlo, emlonyeni, kwilungu lobufazi, kwingqele okanye kumchamo.
Umbono ngokubanzi ulungile. Oku kuyinyani ngakumbi ukuba unobangela unokuchongwa kwaye ususwe. Ukulawulwa kwexesha elide kwale meko kuhlala kuyimpumelelo.
Intliziyo kaZwelonke, iMiphunga, kunye neZiko leGazi (NHLBI)
yintoni i-acal caff caff
I-metronidazole cream ye-topical 0.75
Imiphumo emibi ye-lyrica
camphor yezilonda ezibandayo
Elona xesha lilungileyo lokuthatha i-bystolic